Tag: Dhadhaab | Sagal Radio Services
Baaritaanka faraha oo wali ka socda xeryaha Dhadhaab
Wali waxaa xeryaha Dhadhaab ka socda baaritaanka faraha si loo xaqiijiyo Kenyan-nimada dad aad u badan oo Soomaalida Kenya ah oo waa hore xeryahaa isaga diiwaan galiyay qaxooti ahaan si raashin iyo cawimaad kale ay u helaan.
Mandheera Kenya: Lix qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday basas
Sagal Radio Services • News Report • July 1, 2016
Wararka ka imaanya gobolka Soomaalida ee Waqooyi-bari Kenya ayaa sheegaya in maanta rag hubeysan ay weerareen basas maraayay deegaan ka tirsan degmada Mandheera.
Sagal Radio Services • News Report • June 6, 2016
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta lagu wadaa in markii u horeysay uu booqdo Xerada Qaxootiga Dhadhaab, halkaasoo ay ku nool yihiin nus milyan ruux oo qaxooti Soomaaliyeed.
Wafdi Wasiiro isugu jira Soomaali iyo Kenyan oo gaaray xerada qaxootiga Dhadhaab
Wafdi Wasiiro isugu jira Soomaali iyo Kenyan ayaa gaaray xerada qaxootiga Dhadhaab, kuwaasoo horu dhac u ah Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadaha soo socda lagu wado inuu booqdo Xerada Qaxootiga Dhadhaab.
Haween uur leh oo cagaarshow ugu dhintay Dhadhaab
Sagal Radio Services • News Report • September 19, 2012
Afar ruux, ayaa la sheegay inay xeryaha qaxootiga Dhadhaab maalmihii ugu dambeeyay ugu geeriyoodeen cudurka cagaarshowga oo hadda fara ba’an ku haya qaxootiga halkaasi ku dhaqan, sida ay sheegeen dhaqaatiirta halkaa ka howl gasha.